IHuawei Mate 20 ibonakala kwiGeekbench ngeKirin 980 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei Mate 20 yenza ukubonakala kwiGebenbench ngeKirin 980
IHuawei iceba ukumilisela iMate 20 kunye neyona nto iphambili kuyo kwinyanga ezayo ye-16 ka-Okthobha eLondon kumnyhadala ngesimbo. Ngolo suku siza kuzazi zonke iinkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu zeflegi elandelayo yendlu yamaTshayina. Nangona kunjalo, ezinye iinkcukacha zezi zixhobo aziseyiyo imfihlo.
Kwakudizwe ngaphambili ukuba iprosesa eya kuthi ixhobise iMate 20 kunye neMate 20 Pro iya kuba yiyo Kirin 980, chipset entsha yokusebenza okuphezulu kwenkampani, ethi ingaphezulu kwe-A12 Bionic ka-Apple, ngokwale. Ngoku, njengeendaba ezintsha, isixhobo sokuqala esikhankanyiweyo sivele kwiGeekbench ecaleni kwale nkqubo-kwi-Chip, ityhila idatha enomdla kuthi.
I-Mate 20 (iHuawei LYA-L29 kwiGeekbench) kunye neKirin 980 ikwazile ukufumana amanqaku e-3.390 kuvavanyo lwe-single-core, ngelixa ifikelele kumanqaku e-10.318 kuvavanyo oluninzi. La manqanaba ayibeka ngaphezulu kweKirin 970 kunye neQualcomm Snapdragon 845 ngokwendlela yokusebenza.. Ukongeza, yavela ngePie ye-Android 9.0 njengenkqubo yokusebenza kunye ne-6 GB ye-RAM.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, i-CEO yeQela leShishini labaThengi, uRichard Yu, uthe iKirin 980 entsha inecandelo le-NPU elizinikeleyo lobukrelekrele bokuzenzela, I-GPU enamandla kakhulu kunye nokusebenza okuphezulu kwe-cores yemisebenzi efuna umsebenzi. Uye wakhankanya ezinye izibonelelo, etyhila into enokukwazi ukuyenza entliziyweni ye-Mate 20.
Ngokolindelo, ngaphakathi kwi-Mate 20 kuya kubakho i-6/8 GB yememori ye-RAM kunye ne-64/128/512 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Esi sixhobo siza kuba nemodyuli yekhamera kathathu ngasemva kwesixhobo- esiya kuthi sinikezwe amandla okumangalisa nge-AI, ngcono kunaleyo P20 Pro-Iyakukhwela i-6.53-intshi ye-diagonal AMOLED FullHD screen kunye nenotshi ephezulu enomlinganiso we-19.5: 9 kwaye iya kuba ne-4.000 mAh ibhetri ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza, eya kuthi ngokucacileyo isinike enye- Ukuzimela komhla wokusetyenziswa, ubuncinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei Mate 20 yenza ukubonakala kwiGebenbench ngeKirin 980
I-PAC-MAN: URalph waphula iMaze yinguqulelo ehlaziyiweyo yomfanekiso wevidiyo
Uyenza njani imowudi yasebusuku kwi-Twitter